Dareemka Xawaaraha Garaashka ABS
Baabuurta Rakaabka ah
Gaari Rakaab ah
Dareemka Heer kulka Gaaska
EGTS-Baabuurrada Rakaabka ah
Dareemka Cadaadiska Daalka
Weili Sensor - Wenzhou Weili Car Fittings Co. Ltd., waxaa la aasaasay 1995, naqshadeynta iyo soo saarta dareemayaasha baabuurta ee baabuurta, waxay dejisay oo ku dabaqdaa nidaamka maaraynta tayada IATF 16949: 2016, ISO 14001, iyo OHSAS 18001.
In ka badan 3000 tixraac ayaa laga heli karaa noocyada kala duwan ee alaabta Weili oo ay ku jiraan ABS Sensor, Sensor Crankshaft, Sensor Camshaft, Dareemka Heerkulka Gaaska Daaqaya (EGTS), Dareemka Cadaadiska Dareemaha, Sensor MAP, iyo Sensor NOx leh OEM tayada u dhiganta.
Weili hadda waxay dabooshaa aagga warshadda 18000㎡ waxayna shaqaaleysiisaa 190 qof guud ahaan, waxay u dhoofisaa 80% iibkeeda 30+ waddan. Waad ku mahadsan tahay in ka badan 400,000 oo xabbo oo kayd ah iyo nidaamka maaraynta bakhaarka caqliga leh, Weili waxa ay macaamiisheeda siin kartaa adeegga ugu dhakhsaha badan ee gaarsiinta.
Tayada badeecadu aad bay uga walaacsan tahay Weili, tani waa aasaas muhiim u ah horumar waara oo u dhexeeya Weili iyo macaamiisheeda. Dhammaan dareemayaasha waxaa lagu soo saaray tijaabooyin adag oo adkeysi waxaana la kormeeraa lana kontaroolaa tallaabo kasta oo habka wax soo saarka ah, hubaal 100% waa la tijaabiyay ka hor dhalmada.
Ku dadaalay, bartay, urursaday, had iyo jeer jidka horumarka. 17 sano gudahood, Weili aad ayaa loo ammaanay wuxuuna helay qanacsanaanta macaamiisha badan ee adduunka oo dhan, welina wuu soo hagaagayaa.
Weili wuu dhashay, wuxuu wax ka qabtaa qaybaha matoorka.
Wuxuu bilaabaa inuu baadho ABS Sensor, Crankshaft & Camshaft Sensor.
Warshada wax soo saarka ee Weili waxaa lagu aasaasay 3000 m2.bilaabatay horumarinta iyo soo saarista ABS Sensor, Crankshaft & Camshaft Sensor.
Dhoofinta ayaa bilaabma.
Dhoofinta in ka badan 15 dal iyo tirada badeecada oo dhan 200 oo shay.
Bedka warshadda ilaa 7000 m2 iyo kala duwanaanta badeecada ilaa 400 oo walxood.
U guuri warshad cusub oo leh 18000 m2, Nidaamka ERP cusub ayaa la soo bandhigay oo u diyaari kaydka dhammaan dareemayaasha, wadarta guud ee badeecada ilaa 900 oo shay.
TUV IATF 16949: 2016 waa la cusboonaysiiyay oo bilaabay in ay cilmi baaris ku sameyso dareemayaasha nidaamka daminta: Dareemka Heerkulka Gaaska Dabaysha (EGTS) iyo Dareemka Cadaadiska Dareemaha (DPF Sensor).
Wuxuu bilaabay mashruuca OE.
Aqoon-is-weydaarsiga cusub ee 600m2-ka-la'aanta boodhka ayaa loo aasaasay soo saarista EGTS iyo DPF Sensor. ABS & Crankshaft & Camshaft Sensor waxay u dhexeeyaan 1800 oo walxood. Wuxuu bilaabay inuu cilmi-baadhis ku sameeyo NOx Sensor.
Aqoon-is-weydaarsiga wax-soo-saarka ee ABS & Crankshaft & Camshaft Sensor aad ayaa loo horumariyay. Aqoon-is-weydaarsiga cusub ee-boorka-la'aanta ah ayaa loo aasaasay soo saarista NOx Sensor.
ABS & Crankshaft & Camshaft Sensor waxay u dhexeeyaan 2700 oo walxood. In la sii wado...
Dareemka Heerkulka Daalka
Walxaha cusub ee ku jira Weili Catalog - 2021-10
Walxaha cusub ee ku jira Weili Catalog - 2021-08
Kursiga Abs Sensor, Audi Abs Sensor, Gaariga Abs Sensor, Vw Abs Sensor, Skoda Abs Sensor, Dareemaha xawaaraha giraangiraha xamuulka,
© Xuquuqda daabacaadda - 2011-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.